Ishibhile eshibhile se-Carbon Fibre Indwangu ifektri kanye nabaphakeli UChengyang
Indwangu ye-Carbon Fibre ye-Unidirectional yenziwe nge-carbon fiber ngesitayela se-unidirectional eselukiwe, isitayela sokuluka esicacile noma isitayela sokuluka. AmaCarbon Fibers esiwasebenzisayo aqukethe amandla aphakeme -ukukhuluphala nokuqina -ukukhuluphala, izindwangu zekhabhoni zisebenza ngokufudumele nangokweqile futhi zibonisa ukumelana nokukhathala okuhle kakhulu. Lapho yenziwe kahle, inhlanganisela yendwangu yekhabhoni ingafinyelela amandla nokuqina kwensimbi ngokulondolozwa kwesisindo okubalulekile.
I-Unidirectional CarbonI-Fiber Indwangu yenziwa nge-carbon fiber ngesitayela eselukiwe esingavumelani, ukuluka okusobala noma isitayela sokweluka. AmaCarbon Fibers esiwasebenzisayo aqukethe amandla aphakeme -ukukhuluphala nokuqina -ukukhuluphala, izindwangu zekhabhoni zisebenza ngokufudumele nangokweqile futhi zibonisa ukumelana nokukhathala okuhle kakhulu. Lapho yenziwe kahle, inhlanganisela yendwangu yekhabhoni ingafinyelela amandla nokuqina kwensimbi ngokulondolozwa kwesisindo okubalulekile.
6) Thayipha: 1k, 3k, 6k, 12k, 24k
I-Unidirectional Carbon I-Fiber Fabric isetshenziselwa kakhulu i- Isikhala somoya,Ukwakhiwa,Izikhwama,Izimpahla zezemidlalo,Imishini yemishini,Isakhiwo semikhumbi,Imoto.
igcwele emqulwini ejwayelekile ukuthekelisa ibhokisi noma ngezifiso
Imikhiqizo egoqiwe isongwe ngezikhwama zepulasitiki bese ifakwa ebhokisini lekhadibhodi
Imininingwane Yokuletha: Izinsuku eziyi-7 ngemuva kokuthola ishidi le-oda
Langaphambilini Indwangu Yengilazi Ye-Ptfe
Olandelayo: 1k Carbon Fibre Indwangu
Indwangu yeCarbon Fiber Unidirectional
Indwangu ye-Carbon Fibre eluhlaza
Indwangu yeCarbon Kevlar Hybrid
Indwangu Yesikhumba se-Carbon Fibre
Indwangu Yesikhumba Ephephuliwe
Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu,